Banana muffin | Colourful Recipes
← Green tea chicken curry
ထောပတ် သိုးသားကင် →
Banana – 4, mashed
Butter – 1/3 cup, melted
Top with chocolate chip, raisin or any nuts as you like to sprinkle.
Bake for 20~22 minutes or untilatoothpick inserted in center comes out clean.
Allow to cool inatin for 10minutes.
Cooking time : 20~22 minutes
Make : 12 muffin
Bake mini muffin for 10 ~ 15 minutes and Large muffin for 25 ~ 30 minutes.
Banana muffins are easy to make for kids.
ဌက်ပျော်သီး – ၄ လုံး၊ အမှည့်ဆို ပိုကောင်းပါသည်။ ခြေထားပါ။
သကြား – ½ ခွက်
ထောပတ် – 1/3 ခွက်၊ ထောပတ် အရည်ဖျော်ထားပါ။
ဂျုံမှုန့် – 1 ½ ခွက်
Baking soda – လက်ဘက်ရည်ဇွန်း ၁ ဇွန်း
Baking powder – လက်ဘက်ရည်ဇွန်း ½ ဇွန်း
အပေါ်မှာ ဖြူးဖို့ ချောကလက် အတုံးသေးသေးလေးများ၊ စပျစ်သီးခြောက်များ၊ သီဟိုစေ့ နှင့် ကြိုက်နှစ်သက်ရာ သစ်သီး အစေ့များ …
မုန့်ဖုတ်သည့် အာဗမ်ကို ပူနေအောင် အရင် ကြိုဖွင့်ထားပါ။
ဌက်ပျော်သီး ၄ လုံးကို အရင်ခြေထားပါ။
သကြား၊ ကြက်ဥ၊ ဂျုံမှုန့်၊ ထောပတ်၊ မုန့်ဖုတ် ပေါင်ဒါ၊ မုန့်ဖုတ် ဆိုဒါ ထည့်ပီး မွှေစက်ဖြင့် ညက်နေအောင် မွှေပါ။
muffin case ထဲကို ယောင်းမ တစ်ဇွန်းစီ ခပ်ထည့်ပါ။
အပေါ်မှာ ကြိုက်နှစ်သက်ရာ စပျစ်သီးခြောက်၊ ချောကလက်စေ့၊ ဗာဒါစေ့၊ သီးစုံ အချိုများ .. ကြိုက်နှစ်သက်ရာ ဖြူးပါ။
Preheat oven မှာ မိနစ် ၂၀ မုန့်ဖုတ်ပါ။
မုန့်ဖုတ် ကြာချိန် ၁၅ မိနစ်လောက်ဆိုလျှင် သွားကြားထိုးတံလေးဖြင့် မုန့်သား ကျက်မကျက် စမ်းကြည့်ပါ။
သွားကြားထိုးတံလေးမှာ မုန့်သားများ ကပ်ပါနေလျှင် မုန့်သား မကျက်သေးပါဘူး။
သွားကြားထိုးတံမှာ မုန့်သားများ မကပ်တော့ဘူးဆိုလျှင် ရပါပီ။
အပြင်မှာ ၁၀ မိနစ်လောက် အအေးခံပီးလျှင် စားလို့ ရပါပြီ။
အအေးခံမှ မုန့်နှင့် စကူ ခွါလို့ ရပါလိမ့်မည်။
အတွင်းပိုင်း မုန့်သားလည်း ကျက်ပါတယ်။
By Thet Nandar • Posted in Muffin	• Tagged banana 4, banana muffin, banana muffins, breakfast, food, muffin, purpose flour